सन नेपाल लाइफको उप—शाखा बर्दिबासमा खुल्यो – Shirish News
बर्दिबास , सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पिनि लि. उप—शाखा बर्दिबासमा खुलेको छ । बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुर कुमार कार्कीले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पिनि लि. ११ औं उप—शाखा बर्दिबासको ब्यानर खोलेर शुभआरम्मभ गरे । उद्घाटन समारोहमा कम्पिनिका ब्राण्ड एम्बेटर कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको विशेष उपस्थिती रह्यो ।
बर्दिबासमा पछिल्लो समय विमा कम्पनि तथा बैंक वित्तिय संघसस्थाको खुल्ने क्रम बढेको छ । एकिकृत सेवा केन्द्र बर्दिबास प्रमुख विमलप्रसाद भट्टराईले नागरिकहरुको जीवन सुरक्षित गराउन आग्रह गरे ।
महाप्रबन्धक कमलराज गौतमले बालबच्चाको भविष्यको लागि बचत आवश्क छ, जुन अल्पकालिन होइन् दिर्घकालिन हुनुपर्छ । ‘सुःख दुःखको साथी जीवन विमा हो,’उनले भने,‘असुरक्षित अवस्थालाई विमा कम्पनीले सुरक्षित बनाउँछ ।’ विमा कम्पनिका रकम नेपाल सरकारको कानुनले सुरक्षित राखेकोले पैसा खाएर भाग्छ भनेर भ्रममा नपर्न उनले अनुरोध गरे । उनले भने,‘जीवन विमाले दुःखको पीडामा मलहम पट्टी गर्छ । ’
उद्घाटन समारोहमा कम्पिनिका सद्भावना दुत कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)ले सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पिनि लि.मा ढुक्क भएर विमा गर्न अनुरोध गरिन् ।
विमा समितिमा दुईसय करोंड धरौटी राखेर काम सुरु गरेको सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पिनि लि. ६ असोज २०७४ बाट आफ्नो काम सुरु गरेको बताइएको छ ।
कम्पनिका कार्यकारी प्रमुख राजकुमार अर्यालको अध्यक्षतमा उप—शाखाको उद्घाटन समारोहमा कम्पनिका अभिकर्ता, प्रहरी प्रशासन, वडा अध्यक्ष, शिक्षक लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।यस अघि धनुषाको गोदारमा सन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनि उप—शाखाको पनि उद्घाटन गरिएको थियो ।
जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघमा सिंह प्यानल विजय
मोदीको सम्बोधनमा ५० हजार मान्छे उतार्न आठ जिल्लामा प्रदेश सरकारको सर्कुलर